Resadresaka nifanaovana tamin'i John Pinzon, talen'ny varotra Putumayo.Travel
Home » Interviews » Resadresaka nifanaovana tamin'i John Pinzon, talen'ny varotra Putumayo.Travel
Putumayo.travel dia ny birao ofisialin'ny mpizahatany / mpitari-dalana ho an'ny faritr'i Putumayo, atsimo andrefan'ny Colombia eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Ekoatora. Manolotra karazana fampahalalana isan-karazany momba ireo toerana fizahan-tany izy ireo ary manantena ihany koa ny hampisondrotra ny fizahantany any Putumayo.
.Travel: Iza no putumayo.travel ary avy aiza ianao no mipetraka?
Putumayo Travel dia tranokala mpizahatany izay anay, InfoCASE Colombia, Ingeniería de Software, EU Miorina ao Florencia - Caquetá Colombia izahay.
.Travel: Iza ny mpihaino kendrenao? Inona no antenain'izy ireo rehefa mitsidika ny tranokalanao izy ireo? Torolàlana ofisialy ve ianao sa mivarotra fitsidihana sy hetsika?
Ny mpihaino kendrentsika dia ireo izay maniry hivezivezy sy hanaiky ny natiora ary ny zava-mahaliana. Tianay ny manolotra azy ireo ny fampahalalana momba ny fizahan-tany rehetra ilain'izy ireo momba an'i Putumayo miaraka amin'ny fitsangatsanganana fonosana sy ireo hetsika fitsangatsanganana toy ny abseiling, rappel, rafting whitewater, trekking, fitsangatsangana sns.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, InfoCASE Colombia, Ingeniería de Software, EU, dia orinasa manolo-tena amin'ny fampandrosoana, fizarana ary fampiasana teknolojia fampahalalana sy fifandraisana amin'ny orinasa bitika, kely, salantsalany ary lehibe, ary koa ny fanohanana ny fizotran'ny fikarohana sy ny fampandrosoana teknolojia ( I + D) ary niasa tamin'ny fanamafisana sy ny fanamafisana ny sehatra samihafa amin'ny toekarena isam-paritra.
Manana soatoavina 5 lehibe izahay:
- Mahaiza manaitaitra, mamorona ary misokatra
- Manangana fifandraisana misokatra sy marina amin'ny fifandraisana
- Miezaha ary ho tapa-kevitra
- Mamihina sy manova fiara
- Araho ny fitomboana sy ny fianarana
.Travel: Andao hiresaka momba ny karazana fitsangatsanganana sy toeran-kaleha izay hampiroboroboanao amin'ny tranokalanao? Colombia ve, ary indrindra kokoa ny Putumayo, toeran-tsakaizam-pianakaviana?
Putumayo dia departemantan'i Kolombia. Ny teny putumayo dia avy amin'ny fiteny Quechua. Ny matoanteny p'utuy dia midika hoe "mipoitra" na "mipoaka", ary ny mayu dia midika hoe renirano. Midika izany fa "ony mikoriana." Ny velarantanin'ity tany mahavariana ity dia 24,885 km2. Noho izany, araka ny hitanao dia misy zavatra maro azo tsidihina sy atolotra satria mahavariana tokoa ny hydrografia noho ny renirano, ny farihy ary ny riandrano, ny biby sy ny zavamaniry ao aminy dia mampiavaka sy mahaliana, ary mahafinaritra ny gastrolojia. Ny ataonay dia mampifangaro sy mamorona fonosana mora vidy sy mety amin'ny karazana mpizahatany sy sokajin-taona rehetra, anisan'izany ny fianakaviana.
.Travel: azonao faritana amin'ny fehezanteny indray mandeha ve ny antony tokony hitsidihan'ny mpivahiny an'i Colombia sy Putumayo amin'ny taona 2018?
Raha te-hamorona fahatsiarovana tsy hay hadinoina ianao dia mandehana mankany Putumayo ary mitsangatsangana mankany amin'ny riandrano "Faran'izao tontolo izao", mandritra ny dia mandritra ny androm-piainana.
.Travel: Inona ireo fironana sy fivoarana misy akony amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny orinasanao ankehitriny?
Ny fironana lehibe miantraika amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny orinasantsika dia:
Ecotourism: Niala tamin'ny fizahantany mahazatra mankany Ecotourism isika izao. Tombanan'ny manam-pahaizana sasany fa ny ecotourism dia maneho ny 11.4% amin'ny fandaniana amin'ny mpanjifa. Zava-dehibe tokoa ho an'ny millennial ny fitazonana tsara ny lova voajanahary ho singa fototra ho an'ny ecotourists, arahin'ny fandinihana ny zavamaniry / zavamananaina, traikefa amin'ny fiainana an-kalamanjana amin'ny faritra voajanahary voaaro, ary ny toeram-ponenana eo afovoan'ny natiora
Fizahan-tany fizahan-tany: Miakatra haingana eo amin'ny tsenantsika izy io. Misongadina eo amin'ny tsenan'ny fizahantany izao ny hetsika toy ny diabe, fitsangantsangana, abseiling, lakana, rappel, rafting, ary zip-lining.
.Travel: ny paikady fampiroboroboana ny fizahan-tany mahomby dia mitaky fananana tranokala manintona sy mahomby. Ahoana no mampiavaka ny tranonkalanao?
Tsy manam-paharoa ny tranokalanay noho ny votoatin'ny Putumayo ary manana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'izany izy handrakofana ny takiana rehetra amin'ny mpitsidika ny faritra, na firy taona na firy taona. Manolotra fampahalalana sarobidy izahay.
.Travel: Ahoana ary oviana ianao no nahalala momba .travel ary nanomboka niara-niasa taminay?
Fantatray tamin'izany fa ny domaine dia lavitra dia zava-dehibe tokoa ho ekena amin'ny fizahan-tany sy ny fizahantany fizahan-tany. Noho izany, tsy nijanona nieritreritra safidy hafa izahay, fa tonga dia naka ny sehatra .travel anay.
.Travel: ny fisafidianana ny sehatra / marika mety amin'ny Internet no dingana voalohany mankany amin'ny fahombiazana amin'ny Internet. Raha ny fahitanao azy, inona ireo tombontsoa lehibe atolotry ny domain .travel amin'ny tranokalanao, ny orinasanao ary ny toerana itodihanao?
- Ny fanekena izay manome ny orinasa.
- Fahafahana mamaritra ny mombamomba ny fizahantany amin'ny Internet.
- Ny mety hampahafantarana an'i Putumayo manerantany.
- Manampy amin'ny fitomboan'ny orinasanay.
Ny mpandeha “very hevitra tanteraka” dia latsaka ao anaty fantsona fandosirana: Mety ve ny fitsangantsanganana an-tsambo?